Mankanà lalambe mankany amin'ny Google Earth
Rehefa manisy lalana amin'ny Google Earth isika dia azo atao ny mampiharihary ny haavony amin'ny fampiharana. Fa rehefa misintona ilay rakitra izahay dia mitondra ny laharan-jarahasiny sy ny laharan-jarahasiny ihany. Aro foana ny haavony. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba hanampiana ity rakitra ity ny haavony azo avy amin'ny maodely nomerika (srtm) izay ampiasain'ny Google Earth. Sariho ny zotra ...
Alefaso ny lisitry ny fandrindrana jeografika mankany amin'ny Google Earth, avy amin'ny Excel, miaraka amin'ny sary sy lahatsoratra manankarena
Ity dia ohatra iray amin'ny fomba ahafahan'ny Excel mandefa atiny amin'i Google Earth. Ny tranga dia izao: Manana lisitry ny fandrindrana amin'ny endrika jeografika desimalaly (lat / lon) izahay. Te handefa any amin'ny Google Earth izahay, ary tianay haseho ao ilay kaody misy ny teboka mahaliana, lahatsoratra iray amin'ny sora-matevina, lahatsoratra manazava, ny sarin'ny ...
Andao hojerentsika ny tranga: nandeha tany an-tsaha aho mba hanangana trano iray, araka ny aseho amin'ity tabilao manaraka ity ary tiako hojerena ao amin'ny Google Earth, ao anatin'izany ireo sary roa nalaiko. Ny geographic UTMa dia mandrindra amin'ny endrika decimal, toy ny ...
Ahoana ny fampidirana sary eo an-toerana ao amin'ny Google Earth
Mamaly ireo fanontaniana sasantsasany tonga amiko, manararaotra mamela ny valiny ho ampiasain'ny besinimaro aho. Fotoana lasa izay dia niresaka momba ny fomba ahafahanao mampiditra sary mifandraika amina teboka ao amin'ny Google Earth, na dia mampiasa adiresy Internet aza. Amin'ity tranga ity dia te hampiseho azy amin'ny alàlan'ny làlana eo an-toerana aho: Raha heverina fa eo amin'ny toerany C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, avy eo ...